A ga-ekwuputa Vivo V19 Pro na mbido March | Gam akporosis
Vivo na-arụ ọrụ ruo nwa oge na mba ndị na-abụghị China, ọtụtụ n'ime ha na-ahụ oge na-adịghị anya nke mbido igwe dị elu. India bụ mba ebe ngwaọrụ dị n'etiti na-abịarị nke nta nke nta na ụlọ ọrụ ndị China nwere mmasị pụrụ iche na ịga nke ọma nke ire ahịa na mba ahụ.
Mgbe na-ere ọtụtụ nkeji nke Vivo V17 Pro nlereanya, na-arụ ọrụ ugbu a n'ụzọ zuru ezu na onye nọchiri ọdụ a na Vivo V19 na Vivo V19 Pro. Onye ikpeazụ n’ime ha ga-abụ onye mbụ ga-abata, V19 ga-eme ya otu ọnwa mgbe erere “Pro” site na atụmatụ.
Ọrịa 91Mobiles kachasị ọhụrụ kwuru nke ahụ A ga-amalite ndoputa Vivo V19 Pro site na February 15, otu ụbọchị mgbe inepo gachara. Ọ bụ eziokwu na mmepụta amalitela mgbe emere ihe maka ọrịa Coronavirus na Shenzhen.
Knownfọdụ atụmatụ nke V19 Pro mara
N'oge a, imeziwanye ngwaike nke V17 Pro bụ eziokwu n'ihi ihe niile nwere ike ịnweta, gụnyere Snapdragon 675 gụnyere. Knowingmara banyere ịdị adị nke Snapdragon 765 ọ bụ ihe ga-ekwe omume ma tinye njikọ 5G ozugbo ọ ghọrọ 100% enwere ike ịnweta.
El Vivo V19 Pro ga-abawanye ihuenyo site na 6,44 ruo 6,5 sentimita asatọ, 12 GB nke Ram ebe nchekwa na nchekwa nke 128 ka 256 Gigabytes na nhọrọ nke mgbasa site na kaadị. Nhọrọ maka ogwe aka S-AMOLED ga-anọgide na-ekwe omume n'ihi arụmọrụ na nnwere onwe enyere n'okpuru usoro V.
Mgbe arụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke igwefoto anọ ahụ, ha ga-nzọ na ya, ọ bụ ezie n'azụ isi ihe mmetụta ga-agbago na Pro nlereanya ma ọ bụghị na mbipụta V19. Obere aka ekpe maka ndoputa gị, anyị ga-ama nkọwa ọhụụ tupu ewetara gị ọkwa site n'aka otu n'ime ihe Vivo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A ga-ekwuputa Vivo V19 Pro na mbido Machị
Ugbu a ị nwere ike igwu egwu nnukwu SNOW BROS ọzọ. kpochapụwo site na mkpanaka gị
The n'azụ panel nke Samsung Galaxy M11 egosi a Mmaji Atọ igwefoto